Barnaamijyo Gaar Ah – Page 3 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Halgankii Daraawiishta: Dhagayso Qeybta 14-aad.
Halgankii Daraawiishta: Dhagayso Qeybta 13-aad.
Halgankii Daraawiishta: Dhagayso Qeybta 12-aad.
Halgankii Daraawiishta: Dhagayso Qeybta 11-aad.
All news duruus Maqaalo Sawiro & muuqaalo Suugaan Uncategorized Wararka Dibadda
cusmaan	 Mar 18, 2019 0
Machadka Cumeyr Guurow waa machad sharci ah oo ay leedahay beesha Ciroole oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed, waxaana wax ku barta kudhawaad 100 caruur ah oo u dhashey beesha. Dhawaan Ardeydaas waxaa usoo dhamaaday marxaladii sadexaad,…
cusmaan	 Mar 16, 2019 0
Jimcihii aynu soo dhaafnay , waa mid kamid ah maalmaha naxdinta badan ee soo maray guud ahaan Muslimiinta gaar ahaan kuwooda ku nool wadamada reer galbeedka, iyadoo koox hubeysan ay weerar ku qaaday labo masjid oo ku yaala wadana New…
15 sano kadib, Tirada Muslimiinta Ruushka oo la filayo iney aad u kororto.
cusmaan	 Mar 6, 2019 0
Mid kamid ah mas’uuliyiinta muslimiinta Ruushka ayaa sheegay in la filayo dhowr iyo toban sano kadib koror aad u baahsan oo ku yimaada tirada muslimiinta Ruushka. Raawi Ceynu-diin oo kamid ah A’imada muslimiinta dalkaas ayaa sheegay in…
WARBIXIN: Maxaad kala socotaa waxa uu salka ku hayo Khilaafka Pakistaan iyo Hindiya?!.
cusmaan	 Feb 28, 2019 0
Wadamada Pakistaan iyo Hindiya,waa dalal deris ah, oo in muda ah ay dhexmarayeen dagaallo toos ah iyo kuwa dadbadan oo salka ku haya gobolka istiraatiijiga ah ee Kashmiir. Gobolkan oo ay leeyihiin dadka muslimiinta, aqalabiyadiisana…
Maraykanku muxuu u laayaa Marrasta Soomaaliyeed?!(Akhriso+Dhagayso)
Dowladda Maraykanka waxaa lagu tiriyaa hormuudka duullaannada casrigan lagu soo qaaday wadamada muslimiinta oo ay Soomaaliya ku jirto. 1992-dii, ciidamo huwan ah oo ay hor boodeyso dowladdan iyada ah ayaa kusoo duulay Soomaliya,…
Sawirro: Xarakada Al-Shabaab oo Dowro U Qabatay Ku Dhawaad 50 Axkaamley Ah oo Laga Soo Xulay Afar…
cusmaan	 Feb 27, 2019 0
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay Dowro u qabatay ku dhawaad 50 Axkaamley ah oo laga soo xulay afar kamid ah Wilaayaadka Islaamiga ah iyadoo ujeedadu ahayd aqoon kororsi, baraarujin iyo in bulshada si hagaagsan…
SAWIRRO: Gaari Dagaal oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Al-Shabaab.
cusmaan	 Feb 12, 2019 0
Dagaal dhowr maalmood kahor ka dhacay qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha hoose ayaa ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ku qabsadeen gaari Tikniko ah oo uu ku rakibanyahay Qori dhashiike ah. Sawirro lagu baahiyay barta…
Al-Kataa’ib oo baahisay Qeybta labaad filimka Aflaxaj Wajh.(Warbixin+Falanqeyn).
cusmaan	 Feb 10, 2019 0
Waa hubaa in inbadan aad maqasheen dilal ka dhacay magaalada Muqdisho, oo loo geystay xubno katirsan dowladda Shisheeye-kalkaalka ah, islamarkaana aad jeclaan lahaydeen inaad aragtaan muuqaallada dilka oo dhacaya iyo qaababka loo fuliyo…
Al-Qaacida oo bogaadisay Weerarkii weynaa ee Riverside Nairoobi.(Warbixin)
cusmaan	 Jan 27, 2019 0
Bayaan kasoo baxay hogaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaacida, islamarkaana ay baahisay mu’assasada As-saxaab ayaa lagu bogaadiyay howlgalkii weynaa ee magaalada Nairoobi, 9-kii bishan Jamaadul Awal ka fuliyeen Inqimaasiyiin katirsan guutada…
Sawirro: Gaari Gaashaman oo ciidamada Al-Shabaab kala wareegeen Dowladda.
cusmaan	 Jan 26, 2019 0
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal kula wareegay gaari gaashaman oo ay wateen ciidamo katirsan dowladda federaalka. Gaarigan gaashaman ayaa qeyb ka ah saanado hub milliteri oo dowlado shisheeye ku wareejiyeen…
Dhageyso Barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada Ee Radio Alfurqaan .
Axmad	 May 20, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan…
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah: Sheekh Cali Katiin(Dhageyso 14-15)
Kitaabka Qasasul Anbiyaa; Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin(Dhageyso 14-15)
Ciidamada Itoobiya oo xasuuq ka geystay dhulka Soomaali-galbeed.